Kooxda IS oo sheegatay weerarka Paris. - BBC Somali
Kooxda IS oo sheegatay weerarka Paris.
Kooxda isku magacawda Dawlda Islaamiga ayaa sheegatay weerarka Paris , iyagoo sheegay in sideed xubnood oo iyaga ka tirsani ay fuliyeen hawlgalkaasi.waxaana ay ku sheegeen warsaxfadeed ay soo sareen in dalka Faransiisku uu yahay bartilmameed.
Iyadoo saddex maalmood oo baroordiiq qaran ah,Faransiiska looga sameynayaa dadkii ku waxyeeloobay weerarkii Paris.
Duqa magaalada Paris, Anne Hidalgo, ayaa sheegtay in magaalada ay wax weyn u gesateen argagixisada, iyadoo kuwa weerarada soo qaadanyna ay bartilmaameed ka dhigteen goobaha dhalinyaradu tagaan.
Dugsiyada iyo jaamacadaha iyo dhismooyin badan oo kuwa guud ah ee magaalada, ayaa la xiray. Booliskana waxay dadka ka joojiyeen dhammaan meelaha guud ee laysugu yimaado ee Paris ilaa khamiistan. Golaha magaalada ayaa ugu baaqay dadka inay dhiig ku deeqaan.